Betfair yakavambwa mukati 2000 uye kubvira ipapo mutambo unopa Paris, munyika zhinji. Nhasi ndiyo huru yekutengesa zvinhu muParis.
Kubva zvaakasikwa, yakadzika muLondon uye yakanyoreswa muguta guru reBritain. Zvisinei, mukubatikana 2016 yemupunga, iyo yakavakirwa muDublin kuti ubatane.
MuSpain, the chaiyo manejimendi ekuvhima marezinesi zviri pamutemo Betfair.
Betfair – ANALYSIS NEZVINSANGANO
Betfair ndiyo imba yeBritain inogara muParis, inopa mukana wakakura uye hurongwa iyo yakakura uye yakanyanya kusanzwisisika kuitisa inozivikanwa pasi rese paParis Stock Exchange Betfair. Ndiyo mubhuki mukuru muUK uye ave mumwe weakanakisa uye anoremekedzwa kwazvo munyika, zvakare muSpain.
KuMiscasasdeapuestas isu tinoziva kwazvo peji ino yeParis, uye kunyange vazhinji kubva kuBetfair. Pamusoro pezvakawanda zvakanaka zvinhu, zvakare zvine zvimwe zvimisikidzo izvo zvatakaedza kuratidza muongororo iyi yatinopa.
Icho chokwadi chekuti Betfair ndechimwe chezvatinofarira chinhu chinogona kunzwisisika kana ukatarisa kuchikamu chemitambo cheParis, kwaunoona zvese zvepamusoro zveyakatangira mareti uye mutengo wemhando imwecheteyo mukirasi yese yebhora.
Yayo inosiyanisa uye nyeredzi chigadzirwa pasina mubvunzo iyo Paris kukosha system – Betfair Exchange – Kuwedzera pakuve wekutanga kupinda mumusika, ichiri iyo yakakura uye yakanaka kwazvo pasi..
Iyi sistimu inokutendera iwe kuti utambe kurwisa vamwe vafambi uye kwete kurwisa imba pachayo, Betfair inzira, sezvo iwe haufanire kunetseka nezvemutengo uri kwauri, asi ivo vanobhadhara diki komisheni pane zvakanaka zvevatengi vavo. Asi chinonyanya kukosha kwauri ... ndechekuti musika unotarisira mikana iri nani.
bvunza, Betfair, asi kwete pakukwirira kwakafanana neBet365 kana William Hill. Kana isu tichireva iyo casino, Betfair inopa dzakasiyana siyana sarudzo uye dzakasiyana dzinopihwa uye nhandare dzakarongedzwa kuti ukwanise semutengi.
kutengesa kwechinyakare uye Paris
Betfair inopa chiitiko chakasiyana kune avo vanoshandisa, sezvo inoshanda seyetsika yekubheja uye Paris senzvimbo yekutenga. Izvo zvinokwanisika kuisa Paris mu “imba” kana kurwisa vamwe vatambi vevanhu. Kuti izvi zviitike, Paris Cruz akafunga kugovera kana kuchinja.
Kupfuura 30 mitambo
Pakupedzisira, asi zvisiri zvishoma, iwe uchave nemukana wekubheja pane zvinopfuura 30 mitambo kubva nezviitiko zvebhola, Tennis kana basketball, inowanzozivikanwa se ice hockey, baseball, tenisi, mabhiridha.
Betfair Inogamuchira Vatengi Vatsva Nemitambo Kubheja Mabhonasi Anogona Kukunda Kusvika 100 €, yakakamurwa kuva mashanu emahara kubva kuParis 20 € yega yega. Sevatengi vemitambo yekubheja, iwe unokwanisa kuwana kusarudzwa kweanenge 30 mitambo yakasiyana.
Iwe uchawana yakafukidzwa yakanakisa yemitambo yakakosha, asi ivo zvakare vane matambudziko ezvematongerwo enyika, kusanganisira vamwe, kunge utaura, surf uye mutengo. Kunyangwe mutsika vakatarisa pamitambo yeBritish, iyo iripo yekupa yakakwana kwazvo uye ingangoita yekune dzimwe nyika, yakatangwa Sports.
Asi nhabvu ine Betfair yakanaka kwazvo. Mumitambo sarudzo yakasarudzika yemitambo kumakona ese epasi. Panguva iyo Betfair inonyanya kutarisa nezvebhola kuEngland, nguva ino neboka renhabvu yaive yakanaka chose.
Chatinoda isarudzo yakanaka yemitambo uye yekutanga kweParis ... unogona kugadzira chimiro cheParis: Mumutambo wenhabvu, huwandu hwemakona mumutambo wenhabvu kana kuumbwa kwechikwata chakachengeteka kana mutambi.
Kunyangwe iyo webhu ingave isina zvinhu zvepasirese zviri nani kupfuura zvinoita. Iwe uchawana dzinenge dzese ligi, Paris bhora uye makwikwi emakwikwi; uye ndinogona kukuvimbisa kuti hauzowani mukana uri nani wekuchinjana Betfair Soccer Paris.
Kana iwe uchida kubheja muSpanish League, asiwo muBundesliga, Prime and Italian series pasina kuzeza… zvinokurudzirwa kushandisa masevhisi eBetfair, anogarawo uye anoshanda muParis.
Paris inokwikwidza uye inobatsira yakananga
Commission bhora musika, tennis uye basketball Betfair ndiyo inokwikwidza pamusika wekubheja. Iyo ine zvakare Turbo quota system, iyo inogona kuvandudza Spanish mitambo yekubheja kana mitengo yayo yakaderera pane dzimwe nyika yepamhepo portal. Uye kana kazhinji vanoita mipiro yakakosha kumitambo mikuru yemitambo.
Imba zvakare ine akasiyana ezviitiko zvehupenyu muParis. Paris mumutambo kana mujaho chiitiko hachifanirwe kupotsa.
Betfair ndeimwe yemabheti anokurudzirwa Julio Maldonado 'Maldini”, mutori wenhau wezvemitambo anove zvakare mubatsiri weFC Barcelona neArsenal muParis Euroleague. Mazhinji epasi renyika. Iwe hausi kuwana referensi iri nani kusarudza paramende. Screen maonero. Bhefafa inoitika haina makwikwi.
Betfair Sports inopa akasiyana-siyana Paris basketball mitambo uye ligi. Unogona kuwana zvese, kubva kuNBA muEuropean League uye iyo Euroleague, asiwo kukwikwidza muAsia kana South America. Shandura sarudzo inodhura, kurudziro yedu ndeyekuenda kuParis Betfair Exchange system mune zviitiko zvikuru seMitambo yeOlimpiki, iyo World Cup uye iyo Euroleague Euroleague.
Kana iwe ukaenda kune saiti yeimba ino, iwe uchaona kuti pane yekunyoresa skrini iwe unosanganisira yako yako ruzivo (izvo zvakakosha kuve zvechokwadi), zita rekushandisa, password uye email. Kugadzira account yeBetfair kuri nyore kwazvo, zvinongotora nguva.